Home » blog » Weydiiya Naftaada Miyuu Faa'iido?
Qofkasta oo kuu sheega in uu jiro isbedel degdeg ah ama mucjiso ah oo kuu ogolaanaya inaad hesho dhuuban aad u adag oo aan wax dadaal ah la jiifin.
Miyaad maqashay taas? Waxay kuu jiifsanayaan.
Xaqiiqdu waxay tahay, waxaa jira gabi ahaanba ma jiro wax degdeg ah ama mucjiso ah marka ay timaado miisaan lumis. Waxaa jira qalab aad u badan oo aad ku dari kartid arsenal: raashin wanaagsan. Qalabka jimicsiga. Kombiyuutarada. Biyaha. Waxyaalahan oo dhan ayaa kaa caawin doona, laakiin midkoodna keligiis ma aha mucjiso ama hagaajin dhaqso ah. Runtu waa, waxaa jira kaliya mid ka mid furaha miisaanka iyo ka dhigista. Kaliya mid ka mid qalabka aad u baahan tahay si aad u hesho caafimaad leh. Lagama iibsan karo. Kama soo baxdo qaab kiniin ah. Ma heli kartid farsamada. Xaqiiqdu waxay tahay, haddaad leedahay, hadda, haddaad sidan u akhrido.
Waxay udhexeysaa dhegahaaga.
Maskaxdaada. Waxa kaliya ee kaa celinaya miisaan lumis ah iyo hab nololeed caafimaad leh waa maskaxdaada. Waa wax kuu sheegaaya in aad run ahaantii u baahan in kaalinta labaad ee baradho la shiiday. Waa wax kuu sheegaya in aad aad u daalan tahay si aad uga baxdid kursiga iyo jimicsiga. Waa wax kuu sheegaya inaad ku guuldareysato.
Laakiin, maskaxdaada sidoo kale waa wax kuu sheegi doona inaad ADIGA samaynayso, inaadan u baahnayn inaad cuntid koobabkaas, taas oo kuu sheegi doonta inaad kici karto duulimaadka jaranjarada. Maskaxdaada ayaa sidoo kale kuu sheegi doonta inaad u qalantid ... haddii aad maskaxdaada ku tababbarto si aad u oggolaato niyad wanaag. Miisaanka culus waxaa la gaarayaa oo kaliya marka aad u ogolaato maskaxdaada inay ogaadaan in aad mudan tahay inaad ku faraxsan tahay oo caafimaad qabto. Maskaxdaada ayaa ah jawaabta mucjisada ah ee dhibcahaaga luminta luminta.
Sidaas, naftaada is weydii: Ma u qalantaa?
June 18, 2015 Jimicsiga blog No Comment
June 2015 Saacadaha Saamaynta